एमबी 2018 नोभेम्बर - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > जे। Tkach देखि कर्मचारी पत्र > MB 2018 नोभेम्बर
हाम्रो वास्तविक मूल्य
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि येशू किन उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ जसरी उहाँ आउनुभयो? के ऊ स्वर्गीय सेनाहरूको साथ आउन सक्दैन र जसले आफ्नो शक्ति र महिमा देखाउन सक्दछ? के ऊ कुरा गर्ने जनावरको रूपमा वा मार्वल कमिकको सुपर नायक जस्तो आउन सकेन? तर हामीलाई थाहा छ, येशू सबैभन्दा नम्र तरिकामा - एक असहाय शिशुको रूपमा आउनुभयो। उनको योजना नराम्ररी मार्नु पर्ने थियो। म मद्दत गर्न सक्दिन तर अद्भुत सत्यको बारेमा सोच्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् जुन उहाँलाई हामीलाई आवश्यक छैन, तर उहाँ जे भए पनि आउनुभयो। हामीसँग सम्मान, प्रेम र कृतज्ञता बाहेक हामीले उसलाई दिन सक्ने केही छैन।
परमेश्वर हामीलाई चाहनुहुन्न, त्यसैले हाम्रो मूल्यवान्‌ प्रश्न खडा हुन्छ। विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोणबाट, हामी तुलनात्मक रूपमा थोरै मूल्यका छौं। हाम्रो शरीर बनाउने रसायनको मूल्य CHF १ around० को आसपास छ। यदि हामीले अस्थि मज्जा, हाम्रो डीएनए र हाम्रो शरीरको अंगहरू बेच्यौं भने मूल्य केही मिलियन फ्र्याकमा जान सक्छ। तर यो मूल्य हाम्रो वास्तविक मूल्यसँग तुलना गर्न सकिदैन। येशूमा नयाँ प्राणीको रूपमा, हामी अमूल्य छौं। येशू यस मूल्यको स्रोत हुनुहुन्छ - परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जीवनको मूल्य। त्रिएक परमेश्वरले हामीलाई कहिँ पनि बोलाउनु भएन ताकि हामी उहाँसँग सदाका लागि, पवित्र र मायालु सम्बन्धमा बाँच्न सकौं। यो सम्बन्ध एकता र समुदाय हो जहाँ हामी स्वतन्त्रतापूर्वक र खुसीसाथ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने सबै चीज प्राप्त गर्दछौं। बदलामा, हामी उहाँलाई हामी संग सबै छ जो सुम्पन्छौं।
शताब्दीयौंको दौडान मसीही प्रेमकहरूले यस प्रेम सम्बन्धको महिमालाई विभिन्न तरिकामा व्यक्त गरेका छन्। अगस्टिनले भने: «तपाईंले हामीलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु भयो। हाम्रो हृदय अस्वस्थ छ जब सम्म यो तपाईंमा नआउँछ। फ्रान्सेली वैज्ञानिक र दार्शनिक ब्लेज पास्कलले भने: “हरेक व्यक्तिको हृदयमा शून्यता हुन्छ जुन परमेश्वर आफैले मात्र भर्न सक्नुहुन्छ।” सीएस लुइसले भने: "परमेश्वरलाई चिन्ने आनन्दको अनुभव गर्ने कोही पनि तिनीहरुलाई संसारको भाग्यमा बेच्न चाहँदैनन्।" उनले यो पनि भने कि हामी मानिसहरु "ईश्वरलाई सोध्न" बनेका छौं।
हामीलाई मानिसहरुप्रति परमेश्वरको प्रेमको वास्तविकता कहिल्यै नबिर्सौं। यदि हामी कष्टमा छौं, शारीरिक वा भावनात्मक छौं भने हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै तालिका उहाँको तालिका अनुसार हटाउनुहुनेछ। जब हामीसँग शोक, हानि, र शोक हुन्छ, हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि भगवान् हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र एक दिन सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ।
आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको प्रियको रूपमा हाम्रो साँचो मूल्यमा रमाऔं।